Hamro Yatra | » शिक्षकको लिखित परिक्षा तीन चरणमा, पहिलो चरणमा ५० र दोस्रोमा ४० अंक ल्याउनैपर्ने ! शिक्षकको लिखित परिक्षा तीन चरणमा, पहिलो चरणमा ५० र दोस्रोमा ४० अंक ल्याउनैपर्ने ! – Hamro Yatra
> शिक्षकको लिखित परिक्षा तीन चरणमा, पहिलो चरणमा ५० र दोस्रोमा ४० अंक ल्याउनैपर्ने !
शिक्षकको लिखित परिक्षा तीन चरणमा, पहिलो चरणमा ५० र दोस्रोमा ४० अंक ल्याउनैपर्ने !
२१ साउन, काठमाडौं । अब स्थायी शिक्षक हुनका लागि तीन चरणमा परिक्षा दिनुपर्ने भएको छ । गत असोज १३ गते संशोधन भएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ९१० औं संशोधन० ले तीन चरणमा परिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जस अनुसार अब शिक्षक सेवा आयोगले सामान्य परीक्षा– एक सय पूर्णाङ्क र विषयगत परीक्षा– एक सय पूर्णाङ्कको परिक्षा लिने छ । यि दुई परिक्षा पनि फरक फरक मितिमा हुने छन् । पहिलो चरणको समानय परिक्षामा उत्तिर्ण हुनेहरुले मात्रै दास्रो चरणको लिखित परिक्षामा समावेश हुन पाउने छन् । प्रथम चरण र द्वितिय चरणमा उत्तीर्ण हुनेहरुले मात्रै तेस्रो चरणको परिक्षमा सहभागि हुन पाउने नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै अन्तरवार्ता –२५ पूर्णाङ्कको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम १८ मा यि तीन चरण सबै उम्मेदवारहरुकोे लागि अनिवार्य गरेको छ । साथै नियमावलीको दशौ संशोधनले २५ पूर्णाङ्क प्रयोगात्मक परिक्षाको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर प्रयोगात्मक परिक्षा सबैको लागि अनिवार्य छैन् । तर, विषयको प्रकृति हेरी आवश्यक ठानेमा आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा लिनेछ, भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रष्ट गरेको छ ।
यस्तै नियमावलीले परिक्षामा कति अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने भन्ने बारेमा पनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । ंनियमावलीको दशौ संशोधनले सामान्य परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क पचास अङ्क, विषयगत परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क चालीस अङ्क तथा अन्रवार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षको उत्तीर्णाङ्क दश अङ्क हुनेछ, भन्ने व्यवस्था पनि प्रष्टरुपमा गरिदिएको छ । अब शिक्षकले स्थायी हुनको लागि सुरुमा प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नै पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
यसअघि भने, एक सय पूर्णाङ्कको लिखित परिक्षा लिने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त परिक्षामा ४० अंक ल्याएर पास भएपछि अन्तरवार्तामा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था थियो ।